April 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အရှိန်မထိန်းနိုင်သောယာဉ်က ရှေ့မှမောင်းနှင်နေသော ယာဉ်အားဝင်တိုက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီအချိန် နေပြည်တော်၊ ဒက်္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၀၂/၀-၁)ကြားတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်း အရ ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်နေ ဘုန်းမောင်ဦး(၅၁)နှစ် မောင်းနှင်လာသော ၄စ/xxxx တိုယိုတာတောင်းအေ့စ်အဖြူရောင်ယာဉ်မှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရှေ့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ဇော်မင်းလတ်(၃၀)နှစ်မောင်းနှင်သည့် 8J/xxxx လိုက်ထရပ်အဖြူရောင်ယာဉ်၏ ဘော်ဒီယာဘက်နောက်ပိုင်းစွန်းအား ၀င်ရောက်တိုက်မိပြီး ယာဉ်(၂)စီးလုံး လမ်းလယ်ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်ရှိရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ တိုက်မိမှုကြောင့် 8J/xxxx ယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘဲ ၄စ/xxxxယာဉ်ပေါ်ပါ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊(ခ)ရပ်ကွက်နေ ဦးမြတ်ဇော်(၄၈)နှစ်တွင် ၀ဲခြေဖ၀ါး/၀ဲခြေဖနောင့်/၀ဲခြေခုံ/ယာခြေသလုံးပေါက်ပြဲ၊ ယာဒူးခေါင်းညိုမဲဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် နေပြည်တော်ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ပြီး 8J/xxxx ယာဉ်၏ ဘော်ဒီယာဘက်နောက်ပိုင်းပိန်ချိုင့်၊ ဘော်ဒီယာဘက်ခြမ်းဆေးပွန်း၊ ယာဘက် ရှေ့အချက်ပြ မီးကွဲ၍ တန်ဘိုးငွေကျပ် (၁)သိန်းခန့်နှင့် ၄စ/xxxxယာဉ်၏ရှေ့ခေါင်းပိုင်းဝဲဘက်ခြမ်း၊ ရှေ့လေကာမှန်ကွဲ၊ ၀ဲတံခါးပိန်ချိုင့်ပျက်စီး၊ ၀ဲ/ယာရှေ့မီးသီးကွဲကာ တန်ဘိုးငွေကျပ်(၅)သိန်းခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ဘုန်းမောင်ဦးအား ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၁၀/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟင်္သတတွင် ရုတ်တစ်ရက် ဓါတ်ဆီလှယ်ရာမှ အပှုရှိန် လွန်ကဲ၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
ဟင်္သာတ ဧပြီ ၃၀
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတ မြို့နယ် ညောင်ပင် ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံ ကျောင်းလမ်းနှင့် တာသစ်လမ်းထိပ် ဆုံရာ (ယခင် မိုးဂွဲကျောင်းဂုံး) ယခု တိုက်သစ် မိုးကောင်း ကျောင်းဂုံးရှိ ဧရာရွှေဝါ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်ခွဲတွင် ရေသန့်ဗူး အတွင်းသို့ ဓါတ်ဆီခွဲထည့်စဉ် အပူရှိန် လွန်ကဲမှုကြောင့် ငုင်းဓါတ်ဆီဆိုင်မှ မီးလောင်မှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မီးလောင်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်ရှင် ဦးကြည်လင်း (ဘ) ဦးဘမောင် ပိုင်ဆိုင်သော ဓါတ်ဆီဆိုင်မှ စတင်၍ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၅ နာရီအချိန်ခန့်တွင် စတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး (၁၅း၁၅) အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မီးလောင်မှုကြောင့် (၂၀×၂၀) ပေ သွပ်ကာ သွပ်မိုး ပျဉ်ခင်း ဓါတ်ဆီဆိုင်နှင့် (၁၀×၁၀) ပတ်လည် သွပ်ကာ သွပ်မိုး ပျဉ်ခင်း ဒေါက်တာ အံ့မော်ကောင်းပိုင် ဆေးခန်းတို့ မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ရသည်။
ဆီပုလင်းထဲသို့ ဓါတ်ဆီ ခွဲထည့်စဉ် မဥမ္မာလင်း (ဘ) ဦးကြည်လင်း အသက် (၃၂) နှစ်မှာ ၀ဲဘက် ကိုယ်ခန္ဒာ တစ်ခြမ်းတွင် မီးလောင်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ဟင်္သာတမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပိုဆောင် ကုသလျှက်ရှိကြောင်းနှင့် မီးလောင်ရာ နေရာသို့ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဟင်္သာတ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ် (၄) စီးနှင့် အင်အား (၁၆) ဦး အရံမီးသတ် ( ၁၀ ) ဦးတို့နှင့် အတူ ပြည်သူများက ၀ိုင်းဝန်း ငြိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး မီးလောင် ကျွမ်းမှုကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရုံးမှု တန်ဘိုး ငွေကျပ် (၈) သိန်းခွဲခန့် ဆုံးရုံးခဲ့ကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ သိရှိရပါသည်။
မီးစတင် လောင်ကျွမ်းရာ ပိုင်ရှင် ဦးကြည်လင်း (ဘ) ဦးဘမောင်အား (ပ) ၃၅ /၂ဝ၁၄ ပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
ဆီးချို သွေးချို ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ပျားမြီးရွက်
တစ်နေ့တွင် စာရေးသူနှင့်အတူ တိုင်းရင်းဆေးဆရာ ဦးအေးချိုတို့ ကျောက်မြောင်း
အောင်မင်္ဂလာ မြို့ပတ်လမ်းရှိ ဦးသိန်းလှ(ဦးအန်းတူ) အလုပ်ရုံသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ဆီးချို သွေးချို ရောဂါရှင် ဦးသိန်းလှ(ဦးအန်းတူ)ကို ကျန်းမာဝဖြိုးစွာ တွေ့လိုက်ရ၍ ဆရာ ဦးအေးချိုက—
ဦးသိန်းလှ အသားအရေ ပြောင်းလဲပြီး ကျန်းမာဝဖြိုးနေပုံထောက်တော့ ခင်ဗျားဆီးချိုရောဂါ တော်တော် အခြေအနေ ကောင်းနေပြီနဲ့တူတယ်။ ဘယ်လိုဆေးကောင်းတွေ့ပြီး ကျန်းမာဝဖြိုးလာတာလဲဆိုတာ
တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး ဆရာချို၊ ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ညွှန်ပြလိုက်လို့ ဆီးချိုကျ ဆေးပင်တစ်မျိုးရပြီး အညွှန်းအတိုင်း စားတာနဲ့ ဆီးချိုရောဂါ သက်သာသွားတာပဲ။
ဆေးပင်နာမည်က ဘာတဲ့လဲဗျ၊ အပင်ရှိရင်လဲ မျိုးပေးပါဦး၊ ကျွန်တော်တို့ သုတေသနလုပ်ပြီး
ဆေးပင်နာမည်က ပျးမြီးရွက် အပင်လို့ ခေါ်တယ်။ အပြည့်အစုံသိချင်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဆေးပင်ပေးတဲ့သူရဲ့ အညွှန်းအတိုင်း ပြောပြမယ်၊-ဟုဆိုကာ ဦးသိန်းလှ-က ဆီးချိုရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းစေသော တိုင်းရင်းဆေး ပျားမြီးရွက်အပင်အကြောင်း
အောက်ပါအတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဆေးပင်အမည်မှာ ပျးမြီးရွက်အပင် (bee’s tail plant)ဟုခေါ်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ မူရင်းစိုက်ပျိုးကာ ယိုးဒယား၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာနိုင်ငံများသို့ တိုင်းရင်းဆေး ဝါသနာရှင်များက မျိုးပွားယူခဲ့ကြောင်း၊ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ပျင်ပျော့နွယ်ပင်ဖြစ်ကာ အရွက်သည် ပျားကိုယ်နောက်ပိုင်းနှင့် တူလျက် အရွက်ဘေးတွင် အထစ်များ ပါဝင်သည်။ ပင်စည်နီညိုရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် (၂)မျိုးရှိကြောင်း
အရွက်သည် ပျားပြီးနှင့်တူကာ သာမန်အရွက်သည် အလျား(၄)လက်မခန့်နှင့် အနံ(၂)လက်မခန့် ရှိလျက် မြေသြဇာကောင်းလျှင် အလျား (၅)လက်မခန့်နှင့် အနံ(၂)လက်မခွဲခန့် ရှိသည်။ အခက်အလက်တို့ကို ဖြတ်၍ မြေတွင်စိုက်ရုံဖြင့် မျိုးပွားရှင်သန်လွယ်သည်။
ဦးစွာ ဆီးချို သွေးချိုကို စစ်ဆေးတိုင်းတာရပါမည်။ ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ် တက်နေပါက တစ်နေ့လျှင် ပျားမြီးရွက် (၁)ရွက်အားရေသန့်သန့်နှင့် ဆေး၍ ဝါးစားရန် ဖြစ်ပါသည်။
စားပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ဆီးချို သွေးချို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါက ဆက်စားရန် မလိုပါ။
ဆီးချို သွေးချိုသည် (၂၀၀)နှင့် (၂၆၀)ကြား ရှိပါက ပျားမြီးရွက် (၃)ရွက်အား ရေသန့်သန့်နှင့်ဆေး၍ ဝါးစားရန် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ခါတိုင်းကဲ့သို့ ဆီးချို သွေးချိုကို ပြန်တိုင်းကြည့်ပါ။ ပုံမှန်ဖြစ်ပါက ဆက်မစားဘဲ နေနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဆီးချို သွေးချိုသည် (၄၆၀)ကျော်ထိ ရှိပါက ပျားမြီးရွက် (၆)ရွက်မှ (၉)ရွက်အား
ရေသန့်သန့်နှင့်ဆေး၍ ဝါးစားရန် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ခါတိုင်းကဲ့သို့ ဆီးချို သွေးချိုကို ပြန်တိုင်းကြည့်ပါ။ ပုံမှန်ဖြစ်ပါက ဆက်မစားဘဲ နေနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဆီးချို သွေးချိုသည် ပျားမြီးရွက် အစားများ၍ တအားကျဆင်းသွားပါက လက်ဖက်ရည်အချို စသည့် စားစရာ ဖျော်ရည်တို့အား သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ မူလအခြေအနေ (Normal Level) သို့ ရောက်သွားသောအခါ အချိုဖျော်ရည်၊ အစာတို့ကို ခေတ္တရပ်ထားလိုက်ပါ။ ဆီးချို သွေးချိုကြောင့် ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်သူများသည် အထက်ပါ ပျားမြီးရွက်စားသုံး၍ အဆင်ပြေခဲ့ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
မူလအပင်အား မလေးရှားနိုင်ငံမှ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ထပ်ဆင့် မျိုးပွားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်၊ တနင်္သာရီ၊ ဘုတ်ပြင်း၊ ပဲခူး၊ မြိတ်၊ ကောင့်သောင်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ နမ်းခမ်း၊ တောင်ကြီး၊ ဝန်းသို၊ ဂန့်ဂေါ၊ မန္တလေး၊ ပျဉ်းမနား၊ လက်ပံတန်း၊ ဖားကန့်ဒေသများရှိ ဆီးချို သွေးချို ရောဂါဝေဒနာရှိသူများ၊ တိုင်းရင်းဆေးပင် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လက်သို့ မျိုးပွားဖြန့်ဝေပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဆီးချို သွေးချိုရှိသူ ဝေဒနာရှင် စားသုံးသူများအတွက် အကျိုးထိရောက်မှု ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆရာ ဦးအေးချို၏ မိတ်ဆွေ ဦးသိန်းလှ (ဦးအန်းတူ) က ပျားမြီးရွက်အပင်၏မူရင်း စိုက်ပျိုးသောနိုင်ငံ၊ မျိုးပွား ယူခဲ့သော နိုင်ငံနှင့် ပျံ့နှံ့နေသည့် နေရာဒေသများအကြောင်း အကျယ်တဝင့် ပြောပြခဲ့ပါသည်။
နက္ခတ္တရောင်ခြည် စာဖတ်ပရိသတ်များနှင့် ဆီးချို သွေးချို ရောဂါဝေဒနာရှင်များ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ရန် ဆီးချို သွေးချို ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် တိုင်းရင်းဆေး ပျားမြီးရွက်အပင်အကြောင်း နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်မှ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပေသည်။
တက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖော်ကျူးခြင်းရဲ့ အားအပါဆုံး သင်္ကေတတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အနုပညာလို့လည်း တင်စားလို့ရပါတယ်။ တက်တူးထိုးပြီးသွားတဲ့အခါ တက်တူးအနာ သေသေချာချာကျက်စေဖို့ ခင်ဗျားရဲ့ တက်တူးဆရာဆီက လမ်းညွှန်ချက်တွေ လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ တက်တူးထိုးပြီးနောက် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် စိတ်ချရပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ တက်တူးအနာကျက်မှု ဖြစ်လာမှာပေါ့။
ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းသစ် တွေရှိတဲ့ ခေတ်သစ် တက်တူးစတူဒီယိုကြီးမှာ ခင်ဗျားတက်တူးထိုးပြီးပြီ ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီ့လို တက်တူးထိုးပြီးပြီဆိုရင် တက်တူးထိုးပြီး ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်တွေနဲ့ အတူ တက်တူဆရာက အထုပ်လေးတစ်ထုပ် ခင်ဗျားကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာအနှံ့က အရည်အသွေးမြင့် တက်တူးပါလာ ဖွင့်ထားသူတွေက ကူညီပေးအပ်ထားတဲ့ လုံခြုံစိတ်ချတက်တူးအနာကျက်ရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားရဲ့တက်တူးအတွက် အထူးလမ်းညွှန်ချက်တွေကို ခင်ဗျားကိုယ်ပိုင် ပရောဖက်ရှင်နယ် တက်တူးဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်ဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
. တက်လာတဲ့အနာဖေးတွေကို ဆွဲမခွာပါနဲ့။ မသုတ်ပစ်ပါနဲ့။ အနာကျက်ဖို့စောင့်နေတုန်း လက်ဝတ်ရတနာ ၀တ်ဆင်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
. ဘက်တီးရီးယားတိုက်ဖျက်ရေး လိမ်းဆေးတွေ မသုံးပါနဲ့။
. အရက်ပြန် (ဒါမှမဟုတ်) ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက်အရည် မသုတ်လိမ်းပါနဲ့။
တက်တူးထိုးပြီးခါစ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာ သွေးထွက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ တက်တူးထိုးပြီး ၄၈နာရီနောက်ပိုင်းထိ သွေးဆက်ထွက်နေတုန်း ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ် တက်တူးဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါပြီ။
ထိုးထားတဲ့ တက်တူးအသစ်တွေကို နေ့စဉ် ၂ကြိမ်၊ ၃ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးမွှားတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ တနေကုန် ထိတွေ့နိုင်တဲ့အတွက် ပိုးဝင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တက်တူးကို မကိုင်ခင်တိုင်းမှာ လက်ဆေးဖို့ သတိပြုပါ။ တက်တူးပေါ်မူတည်ပြီး အနာကျက်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ ကွာနိုင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဆက်လုပ်နေရမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားရဲ့ တက်တူးဆရာကို မေးပါ။
တက်တူးအနာကျက်စ ပြုတဲ့ အစပိုင်း ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာ အနာဖေးလေးတွေ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ပါ။ တက်တူးနာကျက်ဖို့ စောင့်နေတုန်းမှာ ဆားရည်နဲ့ ဆေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ခင်ဗျားရဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ် တက်တူးဆရာက ပေးလာတဲ့ စည်းစနစ်တကျ လမ်းညွှန်ချက်တွေအတွက် တိုင်ပင်ပါ။
အဆိုတော် မီးမီးခဲနှင့် ထူးအယ်လင်း တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့်ရရှိ
(ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃၀)
အဆိုတော် မီးမီးခဲနှင့် ၄င်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း တို့နှစ်ဦးအား ယနေ့နေ့လည် နှစ်နာရီခန့် တွင် အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးမှ တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့်ပြု လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မီးမီးခဲထံမှ သိရသည်။
လင်မယားအဖြစ်မှ ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခွင့်ပြုရန်တောင်း ဆိုခြင်းနှင့် နှစ်ဦးသား ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ထက်ဝက်ကို ရရှိရန် မီးမီးခဲဘက် မှ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ယင်း အချက်များကိုလည်း တရားရုံးမှ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
အဆိုတော်မီးမီးခဲကမူ " အစ်မခုချိန်ကစပြီး သမီးကလေးနဲ့အတူတူ ဘ၀ကို ရှင်သန်နိုင်ခွင့် ရရှိသွားပါပြီ။ " ဟုပေါ်ပြူလာနယူးစ်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့် ရရန်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခွဲခန့် အချိန်မှ စ၍ မီးမီးခဲဘက်မှ တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက် ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် တရားရုံးမှ ကွာရှင်းခွင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လန်ဒန်မြို့ ကောင်းကင်ယံမှာ UFO လို့ ယူဆရတဲ့ ယာဉ်ပျံတစ်စီးကို တွေ့ ရှိ
အမျိုးအမည်မသိရတဲ့ ယာဉ်ပျံတစ်စီး လန်ဒန်မြို့ ကောင်းကင်ယံမှာ ပျံသန်းနေ တာကို မနေ့ က ၂၈ ရက်နေ့ က တွေ့ မြင် ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒါဟာ UFO တစ်စီးဖြစ်နိုင်ကြောင်း တစ်ချို့ က ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။
လက်ထပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၈၀ လျော့ချသွားမယ့် ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံး အမျိုးသမီး
‘ ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံးအမျိုးသမီး’ က ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၈၀ ချပြီး သူမရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်ကြောင်း ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ Charity Pierce ဟာ သူမနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးထက် အလေးချိန်နှစ်ဆရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ၇၆၄.၄ ပေါင်နဲ့ ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံးအမျိုးသမီးဆုကို ဆွတ်ခူးထားသူပါ။ အခုတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ဝက်လောက် လျော့ချဖို့ လိုအပ်နေပြီး အသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လို့အစာအိမ်ဖယ်ထုတ်၊ လမ်းလွဲကြောင်းခွဲစိတ်မှု (bypass surgery) ကို ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Charity ဟာ သူမထက် အသက် ၁၆ နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ် ရည်းစားကောင်လေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့ပြီး သူမတို့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဘုရားကျောင်းလျှောက်လမ်းထဲ လမ်းလျှောက်ဝင်နိုင်ဖို့ နဲ့ကခုန်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ အိမ်ထဲမှာတော့ လက်မထပ်ချင်ပါဘူး။ မင်္ဂလာဆောင်လျှောက်လမ်းမှာ လျှောက်ချင်သေးတယ်” လို့ Charity က ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး Country ဂီတ ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင် ၀တ်စုံကို Cowboy ဖိနပ်၊ ဦးထုပ် နဲ့ ဝတ်ဖို့ စဉ်းစားထားပြီး Tony ကိုလည်း ဂျင်းဝတ်စုံရယ်၊ Cowboy ဖိနပ်ရယ် ၀တ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်”
“ ကျွန်မ လူတွေ အများကြီးဆန့် တဲ့ ခန်းမအကြီးကြီးလိုချင်တယ်။ ကျွန်မ တစ်ညလုံး က ပစ်လိုက်ချင်ပြီး အကောင်းဆုံး ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်” လို့သူမက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်ထဲက အိမ်တွင်းလှဲနေခဲ့ရတဲ့ Charity ကို အလေးချိန်လျှော့မချနိုင်ရင် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကြောင်း ဆရာဝန်တွေက သတိပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ နှလုံးဖောက်မှာ၊ သွေးစောင့်တိုးမှာနဲ့ အိပ်ပျော်နေတုန်း သေသွားမှာကို ကျွန်မ အရမ်းကြောက်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်ကတော့ ၁၄ စတုံ (၁၉၆ ပေါင်) လောက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ချင်တာပေ့ါ။ ကျွန်မရဲ့ ကြင်ယာဖက်ကိုလည်း လက်ထပ်ချင်တယ်”
“ ကျွန်မ အများကြီး မလိုချင်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဘ၀တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ချင်ယုံပါ” လို့ Charity က သတင်းထောက်တွေကို ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Charity ဟာ ၅၄.၆ စတုံ နဲ့ ကမ္ဘာ့အ၀ဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် စံချိန်တင်ထားသူပါ။
အမျိုးသမီးများ အတွက် အကောင်းဆုံး အစားအစာများ
လစဉ်ရာသီလာတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုမိုသွေးအားနည်း တတ်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သံဓာတ်ပမာဏ လျော့နည်းတာဟာ အလွန်အမင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ သံဓာတ်ကောင်းကောင်း ရရှိဖို့ အဆီနည်းအသားကို စားပေးပါ။
ကော်ဖီပုံမှန်သောက်ခြင်းက ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ပါးစေနိုင်
နေ့စဉ်ပုံမှန် ကော်ဖီသောက်ခြင်းကို အတန်အသင့်မှ အများအပြားသို့ မြှင့်တင်လိုက်သည့်အခါ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါးသွားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
ကော်ဖီပုံမှန်သောက်ခြင်းသည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာချိန်တွင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို သင့်တင့်မျှတသည့် ပမာဏမျှ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်နိုင်ခြေမျိုးထိ လျှော့ချနိုင်သော ကောင်းကျိုးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်မှ သုတေသီများက ကော်ဖီကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စရာ သတင်းကောင်းကို ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ပုံမှန် ကော်ဖီသောက်ခြင်းကို အတန်အသင့်မှ အများအပြားသို့ မြှင့်တင်လိုက်သည့်အခါ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါးသွားနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
လူပေါင်း (၁၂၀၀၀၀)၏ နေ့စဉ် ပုံမှန်နေထိုင်စားသောက်မှု ဓလေ့စရိုက်များကို ဆက်စပ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းအများကို ခြေရာခံ လေ့လာခဲ့ရာ ယခုရလဒ်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ တစ်နေ့လျှင် ကော်ဖီတစ်ခွက်ခွဲစာမျှ ပုံမှန်သောက်သုံးသူသည် (၄)နှစ်မျှ အကြာတွင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၁၁)ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့နည်း ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ သက်ရောက်မှုသည် Type2ဆီးချိုအမျိုးအစားအတွက် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သုတေသန အဖွဲ့က Diabetologia ဆေးပညာ ဂျာနယ်တွင် ယင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး “တကယ်လို့ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီနှစ်ခွက်လောက် ပုံမှန်သောက်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို (၁၈)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ လျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်”ဟု ထောက်ခံခဲ့သည်။
“ကော်ဖီ သောက်သုံးမှု အလေ့အထကို ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ အတည်ပြု ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်”ဟု ယခုစစ်တမ်းတွင် ပါဝင်လေ့လာသည့် ဟားဗက်ဆေးကျောင်းမှ သုတေသီ ရှီလ်ပါ ဘူပါသီရာဂျူက ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယင်းသို့သော ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးသည် ကာလရှည်ကြာ ကော်ဖီစွဲသောက်ခဲ့သူများတွင်သာ ပိုမိုထင်ရှား ပေါ်လွင်နေကြောင်းလည်း ပညာရှင်များက ယုံကြည်ထားသည်။ တစ်နေ့လျှင် ကော်ဖီ(၃)ခွက်အထက် သောက်သုံးသူများမှာမူ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေကို အမြင့်ဆုံး လျှော့ချနိုင်ပြီး Type 2ဆီးချိုရောဂါ စွဲကပ်နိုင်မည့် အလားအလာ (၃၇)ရာခိုင်နှုန်းထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
မင်းသမီး ဆုပန်ထွာရဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်း သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ သတင်းစာပါ ကြော်ငြာတခု
အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး ဆုပန်ထွာရဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်း သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ သတင်းစာပါ ကြော်ငြာတခု
၂၈.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၀၅ အချိန် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ကျေးရွာအရှေ့ဘက် လယ်ကွင်းအတွင်း၌ အမျိုးသားတစ်ဦးဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျ သေဆုံးနေကြောင်း ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်ဦးမှ အကြောင်း ကြားလာသဖြင့် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ၎င်းကျေးရွာနေ ဦးရဲနိုင်၏နေအိမ်တွင် လယ်သူရင်းငှားလုပ်သူ ဦးအေးငြိမ်း၊ (၅၂)နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး လယ်ကန်သင်းရိုးဘေးတွင် မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် ဦးခေါင်းထိပ် ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ(၂)ချက်ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဦးအေးငြိမ်းသေဆုံးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းအရေးယူပေး ပါရန် ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်ဦးမှ တိုင်တန်းလာ သဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ သရက်ပင်ချောင်နယ်မြေရဲစခန်း
(ပ)၂၄/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ရဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေကို အတွေးအခေါ် ပါတဲ့အတွက် နားမလည်ဘူး ဆိုပြီး ဈေးနှိမ် ဝယ်ယူနေကြတာမို့ အရှုံးခံကာ ဈေးကွက် အ တွင်း ဖြန့် ချိရောင်း ချနေရကြောင်း ဆာတိုရီ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေး ပရိုဂျူဆာ ဦးမျိုးဇော်က ဖွင့်ဟပြောပြသည်။
“မင်းသားသစ်ဆိုပြီးတော့ နယ်ဈေးကွက်တွေ ကလည်း ဈေးနှိမ်ပြီးတော့ ဝယ်ကြ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်ရေး ကလည်း ကိုယ်တင်ပြချင် တာတွေကို ပြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အရှုံးခံ ပြီးတော့ပဲ ဇာတ်ကားတွေ ကို ဖြန့်ခဲ့တယ်။ နယ်ဈေးကွက် မှာလည်း အနှိမ်ခံရတယ်။ ဇာတ်ကားတွေက အတွေးအခေါ် ပါတဲ့ အတွက် နားမလည်ဘူး ဆိုပြီး တော့ ဈေးနှိမ်ပြီး ဝယ် တယ်။ အဲဒီတော့ အရှုံးခံပြီး ရောင်းရတယ်။ ရဲတိုက်လည်း သရုပ်ဆောင် ခ ကောင်းကောင်း မရရှာပါဘူး။ အပြင် ထုတ်လုပ်ရေး နဲ့ ရိုက်မှသာ ပိုက်ဆံလေး ဘာလေးရတယ်။ ရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ကိုလည်း သူက လှူချင် တန်းချင်၊ ပေးချင် ကမ်းချင်တဲ့ ဆန္ဒကများတော့ တွေ့တဲ့နေရာမှာ တွေ့ သလို လှူဒါန်းတယ်။ တခြား မင်းသားတွေလိုမျိုး ပိုက်ဆံ ကောင်းကောင်း မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့နှလုံးသား က နူးညံ့တယ်။ ထိခိုက်ကြေကွဲ လွယ်တယ်။ သူက အဲဒီလို လူမျိုးပါ”လို့ ဦးမျိုးဇော်က ရှင်းပြသည်။
ဆာတိုရီ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေး အနေဖြင့် လက်ရှိအချိန် အထိ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်နှင့် ဇာတ်ကားပေါင်း ၄၆ ကားအထိ ရိုက်ကူး ပြီးစီးခဲ့ပြီး “နတ္ထိ ဟင်းလင်းပြင်” ဆိုသည့် ဇာတ်ကား ကို ရန်ကုန် ဈေးကွက် အတွင်း ဖြန့်ချိရန် ကျန်ရှိနေကြောင်း၊ ရဲတိုက် အမှုတွေ အားလုံး ရင်ဆိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း မှာလည်း ရဲတိုက်နှင့် ပြန်လည် လက်တွဲပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးများ ရိုက်ကူး ထုတ် လုပ် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဆာတိုရီ ထုတ်လုပ်ရေး ပရိုဂျူဆာ ဦးမျိုးဇော် က ပြောပြသည်။
အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲ သေနတ်ဖွက်ယူလာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေး
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် Dallas Archerဆိုသူ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဆိုင်းငံ့ ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကိုင်ဆောင် မှုနဲ့ ရဲတွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
Tennessee ပြည်နယ်၊ Kingsport မြို့ သူ Archer ကို ထောင်မိန့် ချပြီးနောက် အမျိုးသမီးထောင်အရာရှိ တစ်ယောက်က ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပေါင်ခြံကြားက အမည်မသိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထောင်မှူးနဲ့ အမျိုးသမီးရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သူမကို သန့် စင်ခန်းဆီခေါ်ဆောင်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရာ Revolver သေနတ်တစ်လက်ကို သူမရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းက တွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လေးလက်မအရွယ်ရှိတဲ့ Revolver သေနတ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က အသက်ကြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ကားထဲကနေ ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သေနတ်ပိုင်ရှင် အသက် ၇၀ အရွယ် John Souther က သေနတ်လေးကို ပြန်လည် တိုက်ချွတ်ပြီးမှ ပြန်ယူချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
The Smoking Gun သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ Archer ကို သေနတ်လက်ဝယ်ထားရှိမှု ၊ အကျဉ်းထောင်ထဲ တားမြစ်ပစ္စည်း ခိုးသွင်းမှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Archer ကို အာမခံဒေါ်လာ ၆၀၀၀ နဲ့ အချုပ်ထောင်ကနေ လက်ရှိလွှတ်ပေး ထားကြောင်း ထောင်အာဏာပိုင် တစ်ယောက်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရားဝင်ရဲမှတ်တမ်းမှာ “ Ms.Archer ကို ရေချိုးခန်းတွင် ထောင်မှူးက စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ NAA 22 LR revolver အသေးစားတစ်လက်ကို Ms Dallas ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းကနေ ကျည်ဖြည့်ထားလျက်နဲ့ တွေ့ ရှိခဲ့ရတယ်” လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်မှ အစွယ်ဖြင့် ထိုးသတ်၍ ရွာသား(၂)ဦးသေဆုံး
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ပလူဇ၀ကျေးရွာ ချောင်းစပ်အနီးတွင် မည်သည့်အရပ်မှဝင်ရောက်လာမှန်းမသိသော ဆင်တစ်ကောင်ရောက်ရှိလာရာ ရွာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေး ရွာသူ/သားများမှ ၀ါးများအား မီးရှို့ပြီး အော်ဟစ်ခြောက်လှန်မှု့များပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ၎င်းဆင်မှာ ကလေးဝ-မော်လိုက်ကားလမ်းအတိုင်း ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် အဆိုပါဆင်မှာ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီအချိန် ကလေးဝ- မော်လိုက်ကားလမ်းဘေး၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ နန်းစလိန်ကျေးရွာအနီးရှိ ဦးအဲညီထွေး(၄၀)နှစ်၏နေအိမ် အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ ဦးအဲညီထွေးအား အစွယ်ဖြင့်ထိုးသတ်ခဲ့ကာ ကားလမ်းအတိုင်း မော်လိုက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီး နံနက် ၇ နာရီအချိန် မန်ဖာလေးကျေးရွာအနီး၊ ကားလမ်းဘေးရှိ ဦးဘသောင်း(၈၂)နှစ်၏လယ်တဲအားဖျက်ဆီး၍ ဦးဘသောင်းအား အစွယ်ဖြင့်ထိုးသတ်သွားခဲ့ကြောင်း သ တင်းအရ ကလေးဝမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာန/မြို့နယ်သစ်တော ဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ကလေးဝပြည်သူ့ဆေးရုံမှတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အဆိုပါဆင်အား တောနက်ထဲသို့မောင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အကယ်ဒမီလူမင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မှ အနားယူမည်
၁၃၇၆ လူထုရပ်ဝန်းဟောကိန်း – စံ-ဇာဏီဘို
စာပေအနုပညာ လောကတွင် အဓိက အထင်ကရ အနုပညာရှင်ကြီးများ ကြွေလွင့်ကြလိမ့်မည် စာနယ်ဇင်း မီဒီယာသမားများ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ခံရလိမ့်မည် စာပေလောက အကျပ်အတည်းကြုံမည် ယတြာမရှိ
4မဟာသင်္ကြန် နှစ်သစ်ကူးပြောင်းမှု အယူအဆအရ နတ်ပြည်တွင် တည်ရှိသော ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်းကို နတ်သမီးတို့ အလှည့်ကျ တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းရသည်။ အလှည့်စေ့၍ နတ်သမီး တစ်ပါးမှသည် အခြားနတ်သမီးထံသို့ ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်း လက်ပြောင်း လက်လွှဲသော ကာလကို အချိန်ကာလ တစ်နှစ်တာဟု သတ်မှတ်သည်။ ကညာဒေ၀ီ နတ်သမီးကား အလှည့်စေ့၍ ပရမီသွာနတ်မင်း၏သား ““အာသီ””အမည်ရှိသော ဗြဟ္မာမင်း၏ ဦးခေါင်းကို ကမ်းသည်ရှိသော် စံသီနတ်သမီးကား ရွှင်သောမျက်နှာဖြင့် လှမ်းလင့်၏။ ဤကား ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်း လက်လွှဲ၍ နှစ်ကူးခြင်းဆိုင်ရာ အယူအဆဖြစ်သည်။
မဟာသင်္ကြန် အယူအဆအရ ကောင်းကင်ထက်၌နေမင်းကို သင်္ကြန်မင်းဟု ခေါ်သည်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေမင်း မိဿရာသီသို့ ရောက်ရှိချိန်ကို မဟာသင်္ကြန်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ယခုကာလ မဟာသင်္ကြန် အယူအဆတွင်
ဘာဏုရာဇာမည်သော တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်မင်းသည် နွားနို့သစ်အဆင်းနှင့်တူသော အ၀တ်တန်ဆာကို ၀တ်ဆင် လျက် မြွေကိုစီး၍ လက်တစ်ဖက်ကား အဲမောင်း၊ လက်တစ်ဖက်ကား ချွန်တောင်းကိုကိုင်လျက် အနောက်မြောက်ထောင့်ကသည် တောင်သို့ဝင်၏။ ဃောရဿဒေ၀ီ နတ်သမီးကား အဖြူ၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အ၀ါအားဖြင့် ငါးပါးသော အဆင်းဖြင့်ပြီးသော အ၀တ်တန်ဆာကို ၀တ်ဆင်လျက် သင်္ကြန်မင်းကို စောင့်လင့်၏။
၂၀၁၄၊ ဧပြီ ၁၄ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ၊ ၁၈ မိနစ်၊ ၃၉ စက္ကန့်တွင် မဟာသင်္ကြန် ကျ၍ ၂၀၁၄ ဧပြီ ၁၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခင်း မြန်မာစံတော်ချိန် ၂ နာရီ၊ ၂၃ မိနစ်၊ ၂၀ စက္ကန့်တွင် မဟာသင်္ကြန် တက်၏။ ၂၀၁၄ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ကြာသပတေးနေ့သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ ၏ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။
မြန်မာကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆ တစ်နှစ်တာ အတောအတွင်း အလွှာရပ်ဝန်း အသီးသီးကို သုံးသပ်လေသော်
- ကုန်သွယ်စီးပွား ပြုသူများအတွက် ဤတစ်နှစ်တာအတွင်း ကြာသပတေးနံ “မြေ”၊ ဗုဒ္ဓဟူးနံ “ရွှေ”နှင့် စနေနံ ““အထည်၊ ဓာတ်သတ္ထု၊ တွင်းထွက်”” ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်စီးပွား ကမောက်ကမ ဖြစ်မည်။ တနင်္လာနံ၊ အင်္ဂါနံ လုပ်ငန်းများ အထူးကောင်းသည်။ ယခင် ၄ နှစ်ဆက်တိုက် ညံ့သော အညံ့မှ လွတ်မည်။ အလုပ်စီးပွားများ လုပ်သောအခါ အောင်မြင်မှုများရစေရန် သပြေညွန့်၊ သစ္စာပန်းတို့ မကြာခဏ ဘုရားကပ်လှူပါ။ အလှူအတန်းများလုပ်ပါ။
- ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ ထူးထူးခြားခြား ထွန်းပေါက်အောင် လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ အရည်အချင်း ရှိလျှင် ရှိသလောက် တိုးတက်မည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အထိ ထွန်းပေါက်မည်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် များသာမက အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ဘိလပ်မြေ၊ သံချောင်းမှအစ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများတွင် စီးပွားဖြစ်ထွန်း ကြကုန်မည်။ လုပ်ငန်းခိုင်မာ ကောင်းမွန်စေရန် အလို့ငှာ ဂန္ဓမာပန်း၊ သစ္စာပန်း၊ နှင်းဆီပန်းတို့ကို မကြာခဏ ဘုရား ကပ်လှူခြင်းပြုပါ။
- ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ရပ်ဝန်း မှ သူများအဖို့ အလုပ်စီးပွားများတွင် မှန်းချက်မကိုက်၊ ရှေ့တိုး အခက်၊ နောက်ဆုတ်အခက်နှင့် အကျိုးအမြတ် ရည်မှန်းသလောက် မဖြစ်၊ ကျောင်းသားတို့အား ထိန်းသိမ်း အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် သင်ကြားမှုပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာတို့အား ရရှိခက်ခဲသော ပြဿနာတို့ ကြုံပေမည်။ အညံ့အဆိုး ကင်းစေရန် အလို့ငှာ သပြေညွန့် မကြာခဏ ဘုရားတင်ပါ။
- ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်စည်ပို့ ဆောင်ရေး၊ အငှားယာဉ် တက္ကစီယာဉ်မောင်းမှအစ ကုန်ကျစရိတ်၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု ဆိုင်ရာစရိတ်နှင့် လောင်စာဆီတို့ကို အကြောင်းပြု၍ အကျိုးအမြတ် နည်းပါးမည်။ ငွေကြေး အင်အား ကောင်းသူသာ ရှင်သန်နိုင်မည်။ ဂန္ဓမာအ၀ါပွင့် ဓာတ်ပုံကို ဆောင်ယူခြင်းပြုပါ။
- စက်ရုံနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းဝန်းကျင် နယ်ပယ်တွင် စွမ်းအင်ပြဿနာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြဿနာနှင့် အလုပ်သမားမတည်မြဲမှု၊ လူ့အရင်းအမြစ် ပြဿနာတို့ကို ရင်ဆိုင်ရကာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နှေးကွေးမည်။ အဖြူရောင်ပန်းများ၊ သပြေညွန့်နှင့် နှင်းဆီပန်းတို့ကို မကြာခဏ ဘုရားလှူဒါန်းခြင်းပြုပါ။
စာပေအနုပညာလောကတွင် အဓိက အထင်ကရ အနုပညာရှင်ကြီးများ ကြွေလွင့်ကြလိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာသမားများ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခံရလိမ့်မည်။ စာပေလောက အကျပ်အတည်း ကြုံမည်။ ယတြာမရှိ။
အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်မယ်ဟု ထွန်းအိန္ဒြာဗိုပြောကြား
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက လင်းလင်း၊ ချစ်သုဝေတို့နဲ့အတူ သြစတြေးလျ ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲက ရရှိခဲ့တဲ့အလှူ ငွေများကို ဧပြီ ၄ရက်နေ့က MCC မှာ ကျင်းပတဲ့ NLD ပညာရေးကွန်ရက်ဂုဏ်ပြုပွဲ မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ထံကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံများကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် နောက်ထပ် ရန်ပုံငွေပွဲတွေထဲ သဒ္ဓါပေါက်အောင်လို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တင်ဖြစ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ပြောပါတယ်။ သြစတြေးလျမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ဆုကြေးငွေများ ကိုတော့ လင်းလင်းတာဝန်ယူပြီး ကော့မှူးမြို့ နယ်မှာရှိတဲ့ ဘကကျောင်းတွေမှာ သွား ရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ကြောင်း
သိရပါ တယ်။ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး
ကွန် ရက်များအတွက် နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေပွဲများကို လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကို
" အမေ့အတွက်ကို တော့ ကျွန်မကဘယ်ဘက်က ကူရ ကူရ ကူနိုင်သမျှကူနိုင်တဲ့ဘက်က ကူမှာပါပဲ။ အမေရိကကလည်း အလှူပွဲလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်။
အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးက သိပ်လုပ်သင့်တဲ့နေရာပေါ့။ မြန်မာလည်းများတဲ့ အပြင် ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ရမယ့် စတိတ်တွေလည်း သိပ်များတယ်။ သြစတြေးလျဆိုရင် အလွန်ဆုံး ၄ မြို့လောက်ပဲရှိတာ။ အမေရိကဆိုရင် ၁ဝမြို့ လောက် အနည်းဆုံးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကတည်းက လက်ခံထားတာက ရက်ရွှေ့လာတာ။ အခု ဒီနှစ်မှ သွားဖြစ် သွားတော့ ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပွဲနဲ့ charity ပွဲနဲ့သွားတိုက်နေတော့ ရန်ပုံငွေပွဲက နောက်မှ လာတော့ရန်ပုံငွေပွဲ ကို နောက်ရွှေ့လိုက်ရတယ်။ နောက် နှစ်နှစ်လောက်နေမှပဲ
နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် လှူလိုက်တာပေါ့။ အမေ့ကို ယုံကြည်လို့ လှူ တယ်။ ကလေးတွေကို သဒ္ဓါတရားပေါက်ပြီး သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် တအားသာဓုခေါ်ပါတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကူပေးနိုင်သလောက်ကူ ပေးခြင်းဖြစ်ပေမယ့် ပါတီ၊ နိုင်ငံရေးကိုလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက ...
" နိုင်ငံရေးမှာ တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင် လေ့လာစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလားဆိုရင်လည်း အချိန်ပေးဖို့ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့မြင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့အထိကတော့ လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ နေနေတယ်။ အနာဂတ်တော့ ကျွန်မလည်း မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမေစုကိုတော့ တအားကြည်ညိုတဲ့အတွက် ဘယ်လိုများကူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့စဉ်းစားတော့ ကူနိုင်တဲ့ဘက်က
ကူမှာပဲ။ အမေ့ကို တအားယုံကြည်တယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း တကယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ပါ။ အမေ့ရဲ့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေမှာ ကိုယ်ကူနိုင် သလောက် လိုက်ကူမယ်။ အမေ သမ္မတဖြစ်ဖို့ကတော့ အခြေခံဥပဒေ မပြောင်းမချင်းကတော့ မလွယ်ဘူး။ အမေ့ကို သမ္မတဖြစ်စေချင်ပါတယ်" လို့ ပြော ပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေရော၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းပါ အမှန်တရားဘက်က ပါဝင်ပံ့ပိုးသင့်ကြောင်းကို ထွန်းအိန္ဒြာဗိုက
" အမှန်တရားဘက်ကနေ လူတိုင်းပါဝင်သင့်တယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းက အမှန်တရားတစ်ခုအပေါ်မှာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသင့်တယ်။ ပံ့ပိုးတဲ့ နိုင်ငံသားရဲ့ အနေအထားက သာမန်အရပ်သားဆိုရင် သူနိုင်သလောက် celebrity တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်လည်း သူလုပ်သမျှက အင်အားပိုကြီးတာပေါ့။
celebrity တွေအနေနဲ့ အမှန်တရားဘက်မှာ ပိုပြီးတော့ ပါသင့်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အမေစုက အမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေတယ် ဆိုတာ ယုံကြည်တဲ့အတွက် အမေစုဘက်က အမှန်တရားဘက်ကိုပါတာပါ" လို့ ပြောပါတယ်။
ခိုင်သော အရိုးများ တည်ဆောက်နိုင်ရေး (သို့မဟုတ်) အရိုးပွရောဂါ အကြောင်း
Osteoporosis ဟု ခေါ်သော အရိုးပွရောဂါ အကြောင်း ရေးသားလိုသည်။
အရိုးတွင် အပေါက်ငယ် ကလေးများ ပေါ်လာကာ အရိုး၏ ခိုင်မာမှုကို ထိခိုက်ပြီး အရိုး ကျိုးလွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၃ဝ ကျော် အမျိုးသမီးများနှင့် အသက် ၄ဝ ကျော်လာသော အမျိုးသားများတွင် အရိုးများ တဖြည်းဖြည်း ပါးလွှာ လာကာ အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သည်။ အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နေပြီဟု သတ်မှတ် ခံရသောအခါ အရိုးမှာ သိသာစွာ ပါးလွှာနေပြီ ဖြစ်ပြီး သာမန် ထိခိုက်မှု ကလေးကြောင့်ပင် အရိုး ကျိုးနိုင်သည်။ ထိခိုက်မိခြင်း မရှိဘဲ အလိုအလျောက် ကျိုးသူများလည်း ရှိသည်။
ကယ်လ်စီယမ် ထုံးဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် အရိုးပွရောဂါ ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ မ ဟော်မုန်းဓာတ် oestrogen သည် အစာတွင် ပါဝင်သော ထုံးဓာတ်ကို အရိုးအတွင်း စိမ့်ဝင် စေကာ အရိုး ခိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ အရိုးမှာ အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပါး လွှာသည်။ ထိုအချက်များ ကြောင့်ပင် အရိုးပွရောဂါသည် အမျိုးသားများထက် သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီး များတွင် ပို အဖြစ်များသည်။
ခါးနာခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်နှင့် တင်ပါးဆုံရိုး နာခြင်း၊ ပေါင်ရိုးနာခြင်းတို့ ခံစားရ တတ်သည်။ နာကျင်မှုသည် အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတတ်သည်။ အရပ် နိမ့်သွားတတ်သည် (ခါးရိုးပွရောဂါ ရှိသူများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်) သာမန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် အရိုးများ ကျိုးတတ်သည်။ ပေါင်ရိုး ကျိုးခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်ရိုး ကျိုးခြင်းနှင့် ခါးရိုး ကျိုးခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။
ရောဂါ ဖော်ထုတ်ခြင်း နည်းလမ်းများ
Bone X-ray (အရိုးဓာတ်မှန်) ရိုက်ခြင်း၊ DXA (Dual energy X-ray Absortiometry) X-ray ကို အသုံးပြုကာ အရိုး ပါးလွှာခြင်း ရှိ၊ မရှိ တိုင်းတာသည့် နည်းစနစ် ဖြစ်သည်။ T score-၁ နှင့် - ၂ ဒသမ ၅ ကြားတွင် ရှိပါက အရိုး ပါးလွှာနေပြီ ဖြစ်ပြီး ၂ ဒသမ ၅ နှင့် အောက် ဆိုပါက အရိုးပွရောဂါ ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပိုမို ကောင်းမွန်သည်။ ရောဂါ စဖြစ်နေလျှင်တောင် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါလျှင် အရိုးများ ကျိုးခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီး နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကယ်လ်စီယမ် ပါဝင်သော အစားအစာများ စားသုံးခြင်း။ ဒိန်ချဉ်၊ နွားနို့၊ ငါးသေးကလေးများ၊ ဆာဒင်းငါးနှင့် ဆော်လမွန်ငါးများ၊ Almond (မက်မွန်သီး) တို့သည် ထုံးဓာတ် ကြွယ်ဝကြသည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား။ ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။ အရိုးရှိ ထုံးဓာတ်ကို လျော့နည်းစေသော အရည်များ သောက်သုံးမှုကို ရှောင်။ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ကော်ဖီကို တစ်နေ့နှစ်ခွက်ထက် ပိုမ သောက်သင့်။ ကိုကာကိုလာ၊ Pepsi တို့တွင် ပါရှိသော Phosphoric Acid သည် အရိုး တည်ဆောက်မှုကို အနှောင့်အယှက် ပေးသောကြောင့် အလွန်အကျွံ မသောက်သင့်။ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းသည် အရိုး တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင့်အယှက် ပေးသောကြောင့် မသောက်သင့်။ အရိုးကို သက်ညှာစေသော လုပ်ဆောင်မှုများ။ ထိုင်သည့်အခါ ခါးကို မတ်မတ်ထားပါ။ တံမြက်စည်းလှည်း၊ ကြမ်းတိုက်သည့်အခါ ခါးမကုန်းဘဲ ဒူးနှင့် ပေါင်ဆစ်များ (Knee and hip joints) ကိုကွေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျနေသော ပစ္စည်းကို ကောက်ယူရာတွင် လည်းကောင်း၊ အိပ်ရာပြင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အန်ဆွဲကို ဖွင့်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ခါးမကုန်းဘဲ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ လုပ်ပါ။ အလေးအ ပင်မရန် လိုပါက မနိုင်ဝန် မထမ်းပါနှင့်။ မနိုင်ပါက ဘေးလူ အကူအညီ ရယူပါ။ လေးလံသော ပစ္စည်းကို တွန်းရွှေ့ပါ။ ဆွဲမရွှေ့ပါနှင့်။ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေလိုသောအခါ ခါးကို မတ်မတ်ထား၊ ဒူးကွေးကာ လက်နှစ်ဖက် ကို ပေါင်နှစ်ဖက်ပေါ် တင်ပြီး ထိန်းကာ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပါ။ ခါး ရုတ်တရက် လှည့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ဘတ်စကား၊ ရထားပေါ်သို့ ပြေးတက်၊ ပြေးဆင်းခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်သုံးခြင်း။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဝမ်၌ ပြုလုပ်သော သုတေသန တစ်ခုအရ တစ်နေ့လျှင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း နှစ်ခွက် အနည်းဆုံး ပုံမှန် သောက်သုံးပါက ခြောက်နှစ်ကြာသောအခါ အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေ သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွင် မ ဟော်မုန်းဓာတ်နှင့် သဘာဝချင်း ဆင်သော Flavonoids များ ပါဝင်သောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။
ခေတ်မီနေထိုင် စားသောက်မှု ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲ လာသောကြောင့် အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မား လာသည်။ အရိုးပွခြင်းကြောင့် ဆိုးရွားသော နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာနှင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သောကြောင့် ထိုရောဂါ အကြောင်း သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ပြီး ကာကွယ် နိုင်ကြစေရန် ရည်သန်ကာ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် အချက်များကို ရေးသား ဖော်ပြ လိုက်ရပေသည်။ ။
တောင်ကြီး အတက်လမ်းတွင် ကားမီးလောင်မှုဖြစ်
တောင်ကြီး၊ မဇ္ဈိမ။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အေးသာယာမြို့မှ တောင်ကြီးမြို့သို့ တက်လာသည့် ဟွန်ဒါဖစ်ခဲရောင် အမျိုးအစား ကားတစ်စီးသည် ဧပြီလ ၂၄ရက် ညနေ ၄နာရီ ၁၅ မိနစ်က တောင်ကြီး အတက်လမ်း 'ပ'ကွေ့ ရဲကင်းအနီး အရောက်တွင် အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲရာမှ ဝါယာရှော့ခ်ဖြစ်ကာ ကားတစ်စီးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ တွင် ရောက်ရှိနေသည့် တောင်ကြီးမြို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကားမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေ။ ယာဉ်မောင်းနှင့် အတူပါသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး စုံစမ်းဆဲဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ကားမီးလောင်ကျွမ်းမှုကို တောင်ကြီးမြို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှူး ဦးအောင်သူငြိမ်းနှင့် အဖွဲ့ နှင့် အမှတ် (၂) ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ညနေ ၄နာရီ ၂၅မိနစ်တွင် မီးငြိမ်းခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ကားမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို အရေးယူရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ငါးမန်းကြီးကို ဖမ်းမိပြီး အသားကင်လုပ်စားခဲ့သူ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Joey Polk ဆိုသူဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် အလေးချိန် ၈၀၅ ပေါင် ရှိတဲ့ ငါးမန်းကြီးတစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက Earnie ဆိုသူ ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ ပေါင်ချိန် ၇၃၀ ရှိတဲ့ ငါးမန်းကြီးထက် အလေးချိန်ပိုများတာကြောင့် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်ကို ထပ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
၀ါရင့်ငါးဖမ်းသမားတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သူတို့ ဖမ်းဆီးရရှိမိတဲ့ ငါးတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးတတ်ပေမယ့် Joey နဲ့ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ ငါးမန်းကြီးနဲ့ တစ်နာရီကျော်ကြာ တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနောက် အရမ်းပင်ပန်းနေတာ ကြောင့် ပြန်လွှတ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ သုံးယောက်ဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ငါးမန်းကြီးကို ကမ်းခြေမှာတင် မီးမွှေးပြီး အသားကင်လုပ်စားကာ ဒေသခံ လူ အယောက် ၂၀၀ ကျော်ကိုပါ ဝေမျှကျွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ ပထမ တွေ့ တွေ့ ချင်း ဒီကောင်ကြီးကို ငါးအကြီးကြီးလို့ ပဲထင်နေတာ။ နောက်တော့မှ ငါးမန်းကြီးမှန်း သိတာဗျို့ ။ ကျွန်တော် ချာတိတ်လေးအရွယ်ကတည်းက ငါးမျှားလာတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်ကြီးကို ပေါင် ၇၀၀ လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အလေးချိန်ချိန်ကြည့်တော့ ၈၀၅ ပေါင်တဲ့။ အရမ်းမိုက်တယ်” လို့Mr.Polk က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
အခု ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ငါးမန်းအမျိုးအစားဟာ Makos ငါးမန်းမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ငါးမန်းမျိူးနွယ်တွေထဲမှာ အမြန်ဆန်ဆုံး ငါးမန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေမိုင် တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ လောက်အထိ ကူးခတ်နိုင်တဲ့ ငါးမန်းမျိုးတွေပါ။
ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို ကစားပြရင်း အဝတ်အစားလဲ ပြသွားတာနော်
ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို ကစားပြရင်း အဝတ်အစားလဲ ပြသွားတာနော် မြင်ရသူတောင် ရင် ခုန်တယ်သူတို့ အစား ခံစားကြည့်ပါအုံး
ထူးခြားတဲ့ အိန္ဒိယစုံတွဲ အက
ထူးခြားတဲ့ စုံတွဲ အက ရုပ်/သံ လေးပါ။
အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်များခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ လေတိုက်ခြင်း၊ နေလောင်ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သင့်ခြင်းကြောင့် အရေပြားရောဂါ အမျိုးမျိုးခံစားရပါတယ။် ကူးစက်ရောဂါ
ယားနာအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် အရေပြားပြောင်းခြင်း အသက်အရွယ်ကြောင့် အရေပြားဟာ ပြောင်းလာတယ်။ အသက်အရွယ် အလိုက်ပြောင်းတာကို မလွန်ဆန်နိုင်ပေမယ့် ပြင်ပအကြောင်း အရင်းကြောင့် အရေပြားပြောင်းတာကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပအကြောင်းရင်းကြောင့် အရေပြားပြောင်းခြင်း ပြင်ပအကြောင်း အရင်းကြောင့် အရေပြားပြောင်းရတာဟာ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်တာ၊ နေရောင်ထိတဲ့ မျက်နှာ၊လည်ပင်း၊ လက်ဖမိုးတို့မှာ တွေ့ရများတယ်။ မတ်လက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အမှတ်၁၂ ဒသမ ၇ ထိရောက်တယ်။ ပုံမှန် ၈-၁အထိရှိသင့်တယ်။ ယခုအခါ ခရမ်းလွန်ရောင် ခြည်ကြောင့် အရေပြားအောက်ပိုင်း အထိအရောင်ပြောင်းခြင်း၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရေပြားရောဂါ အမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြား ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာဆိုင်ရာ အမူအရာများ ထပ်ကာထပ်ကာလုပ်ခြင်း၊ အသက် ၃ဝ နောက်ပိုင်း အရေပြားဆန့်နိုင်၊ ကျုံ့နိုင်စွမ်း ကျဆင်းကာ အရေပြားလျော့ခြင်း၊ တွဲခြင်း၊ ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်လာ တယ်။ ဆေး လိပ်သောက်ခြင်းဟာ အရေပြား ရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အဓိက လက္ခဏာပဲ ဖြစ်တယ်။ အရေပြားကြမ်းလာခြင်း၊ အရေပြား အဝါရောင်သမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်။ ခရမ်း လွန်ရောင်ခြည် နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အရေပြားမှာ အရေးအကြောင်း ဖြစ်လာခြင်း၊ နေလောင်ကွက်ပေါ်ခြင်း၊ တခြားအရောင်ရှိ အကွက်ပေါ်ခြင်း၊ အရေပြား ကြမ်းခြင်း၊ သွေးကြောမျှင်ပေါ် ဖလာခြင်း၊ မှဲ့ခြောက်များ ပေါ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလို့ အရေပြားပြောင်းလဲခြင်းမှာ Super Oxidics ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ Fibroblasts ဟာ အရေပြားဆဲလ်ရှိ Extramatrie ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည် ဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးပါက အရေဓာတ်နည်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ် တယ်။ ကော်လာဂျင်များဟာ အပေါ်ယံဆဲလ် အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အရေပြား အောက်လွှာကို ထောက်ပံ့ပေးကာ အသက်ကြီးလာပါက အသစ်ထုတ်နိုင်စွမ်း ကျလာပြီး၊ ကော်လာဂျင်များပြန်လည် ဖြိုဖျက်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာတယ်။ အီလက်စတစ်များမှ ဆဲလ်အပေါ်ယံ အဖြစ်နဲ့ အရေပြားရဲ့ ကျုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်မှုဖြစ်စေခြင်း၊ ကျုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာစေတယ်။
ကာရက်တင်ဆိုက်များဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ တခြားထိခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ဆဲလ်အချက်ပေးခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြယ် ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခြင်းက အသက်အရွယ် ကြီးလာ၍ ကာကွယ်ပေးမှု နည်းသွားပြီး အရေပြားပါးလာတယ်။ မယ်လင်နိုဆိုက်များဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ရောင်ခြယ်ဆဲလ်များကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ လွတ်နေတဲ့ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားပေးခြင်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အသက်ကြီးလာရင် အရေအတွက် နည်းပါးကာ သက်တမ်းတိုလာတယ်။ လင်ဂါဟင်ဆဲလ်များက ဓာတ်ပစ္စည်း ပြသပေးပြီး ဆဲလ်အရေအတွက် နည်းလာခြင်းနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာတယ်။ အသက်ကြီးငယ်မရွေး အရေပြား အလှလိုချင်ပေမယ့် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိ သို့မဟုတ် လွဲမှားခြင်းကြောင့် မလှမပဖြစ်ရတယ်။
နေရောင်ခြည်ဟာ ပိုးများကိုသေစေတယ်။ နွေမိုးဆောင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ လိုက် အောင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တယ်။ အရေပြားကို နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ဖို့၊ အဝတ်ပါးပါး အရောင်ဖျော့ဖျော့ ဝတ်ဆင်သင့်တယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အရေပြားတွန့်ခြင်း၊ အစက်အပြောက် ထွက်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ နေရောင်ခံ လိမ်းဆေးဟာ နေပူထဲ မထွက်မီ ၁၅ မိနစ်မှာ လိမ်းပေးရမယ်။ ၂ နာရီ ကြာတိုင်းတစ်ကြိမ် လိမ်းရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သနပ်ခါးလိမ်းရမယ်။ ထီး၊ ဦးထုပ်၊ ယာဉ်ကိုအသုံးပြုရမယ်။
ရပ်နေသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို အရှိန်ဖြင့်တိုက်၍ ယာဉ်တိမ်းမှောက် တဦးသေဆုံး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၃) ရပ်ကွက် ကျိုက်ဝိုင်း ဘုရားလမ်း အလက (၅)ကျောင်းရှေ့၌ ဧပြီ ၁၉ ရက် ည ၇နာရီခန့်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းရပ်ကွက် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း အမှတ်၂၇ ဘီနေ ယာဉ်မောင်း မျိုးမင်းသွင်(၃၃နှစ်) သည် တိုယိုတာ ဟိုင်းလပ်ဆပ်(ဖ်)၂ဂ/--- အနက်ရောင် မော်တော်ယာဉ်ကို ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းအတိုင်း အနောက်မှ အရှေ့သို့ မောင်းနှင်လာစဉ် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား ကားမှတ်တိုင်အနီး လမ်းအလယ်ကျွန်း ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ရပ်နေသော အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို အရှိန်ဖြင့် ဝင်တိုက်မိပြီး ယာဉ်မှာ တိမ်းမှောက်သွားကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၃)ရပ်ကွက် အောင်မင်္ဂလာ ၂ လမ်းသွယ် (၆) အမှတ်-၈၂၂ နေ မအေးသူဇာဝင်း (၂၉နှစ်) နှင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၇) ရပ် ကွက် ၂၄ လမ်းနေ မဝင်းမြတ်သန္တာမြင့် (၃၁နှစ်) တို့ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ပြင်ပလူနာဌာန အရေးပေါ်ကုသဆောင်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့စဉ် မအေးသူဇာဝင်းမှာ ယင်းနေ့ည ၉ နာရီခွဲတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်မောင်း မျိုးမင်းသွင်ကိုအဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ဘုရင့်နောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူထား ကြောင်း သိရသည်။
အနာကွန်ဒါမြွေလို့ လူသိများတဲ့ စပါးကြီးမြွေ တစ်မျိုးဟာ တောင်အမေရိကမှာပဲ ရှိပါတယ်။ သူ့ကို စပါးကြီးမြွေ အမျိုးအစားထဲတောင် မထည့်ပါဘူး။ Anaconda (အနာကွန်ဒါ)မြွေ ဆိုပြီးတောင် သီးသန့် အမျိုးအစား မျိုးဆိပ်တစ်ခု ခွဲထားပါတယ်။ သူ့ထဲမှာမှ အနည်းဆုံး ၇ မျိုးအထိ ထပ်ကွဲသွားပြီး အကြီးဆုံး၊ အရှည်ဆုံး၊ အလေးဆုံး ကတော့ အစိမ်းရောင် အနာကွန်ဒါ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ဖမ်းယူ စားသုံး နိုင်ပါတယ်။ အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွှေများ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် အသုံးပြုတဲ့ မြွှေဖြစ်ပြီး သားကို အရိုးချိုးပြီးတော့ မြိုပါတယ်။ ရေကူးကျွမ်းပြီး ကုန်းနေ၊ ရေနေသတ္တဝါ နှစ်မျိုးလုံးက သူ့အတွက် အစာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွား၊ ဆိတ်၊ ယုန်၊ ရေမြင်း၊ သမင်နဲ့ အကောင်ငယ်၊ အကောင်လတ် အမျိုးမျိုးက သူ့အတွက် အစာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အမေရိက တိုက်မှာပဲ နေပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာ စံချိန်တင် အကြီးဆုံး အကောင်တွေ တွေ့မြင်ရပြီး၊ ဘိုလီဗီးယား၊ ကိုလံဘီယာ တို့လို နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။ တောင်အမေရိကန်က နိုင်ငံတွေတိုင်းက တောထဲမှာ အသက်ရှင် နေထိုင်ကျက်စားပါတယ်။
သူ့မှာ အရွယ်ကြီးထွားမှုအတွက် ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ အသက်ရှင်နေသရွေ့  အရွယ်က ကြီးနေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စံချိန်တင် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး အနာကွန်ဒါဆိုရင် ပေ ၄၀ ကျော်အထိ ရှည်တာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အငယ်ဆုံးကတော့ ၅ ပေအထက်ရှိပြီး ၂၅ ပေ အထိ ရှည်တဲ့ အနာကွန်ဒါများကို အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ပဲ ကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလေးချိန်လည်း စီးပါတယ်။ ပေါင် ၅၀၀ အထက်အထိ စံချိန်တင်တွေ့ရှိထားပြီး ယင်းထက်လည်းပိုလေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာကွန်ဒါကို ဖမ်းဆီးတဲ့အခါကျ ဘူဒိုဇာစက်ကြီးများနဲ့ သယ်ဆောင်ရတဲ့အထိ တောင်အမေရိကမှာ တွင်ကျယ်ပါတယ်။
လူသားတွေကို အန္တရယ်မပြုနိုင်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် နီးနီးစပ်စပ်မနေဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ အများအားဖြင့် သူတို့ရဲ့  သားကောင်ဟာ အခြား တောရိုင်းသတ္တဝါများ ဖြစ်ပေမယ့် လူသားကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားနိုင်ချေ ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာဦးကတည်းက တည်ရှိတဲ့ မြွေမျိုးစိတ် တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ပေ ရာကျော် ရှာတဲ့ အနာကွန်ဒါမြွေမျိုးမှာ တစ်ချိန်က ရှိခဲ့မယ်လို့ လေ့လာသူများက မှတ်ချတ်ပြုထားပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတောင် သေချာရှာမယ်ဆိုရင် ပေ ၅၀ ကျော်လည်းတွေ့နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ သမိုင်းထဲမှာလည်း အကြီးဆုံး ဖြစ်သလို ယနေ့ခေတ်မှာလည်း အကြီးဆုံး၊ အရှည်ဆုံး၊ အလေးဆုံး မြွှေတစ်မျိုး အဖြစ် စံချိန်တင်ပါတယ်။
အနာကွန်ဒါမြွေတစ်ကောင်ဟာ ဥဥရင် အလုံး ၄၀ အထိ ဥတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တောတွေထဲမှာကျ ဥအလုံးရေ ၁၀၀ မကလည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းဥနိုင်တဲ့ အနာကွန်ဒါများ ရှိနေတယ်လို့ လက်ခံ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဥတစ်ခါ ဥပြီးရင် အနာကွန်ဒါမဟာ သူ့ယခင် အလေးချိန်ထက် တစ်ဝက်တိတိ ကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနာကွန်ဒါမြွှေမျိုးကို အခြေခံလို့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဒိုင်နိုဆောကဲ့သို့ အကောင်ကားတွေ များစွာပေါ်ထွက် ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာသာ အန္တရယ်ပြုတတ်တဲ့အကောင်လို ထင်ရမြင်ရပြီး အပြင်မှာကျ လူသားတွေနဲ့ဝေးဝေးနေတတ်တဲ့အကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပေ ၂၀ အထက်ရှည်တဲ့ အနာကွန်ဒါတစ်ကောင်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်းအထက်နဲ့ ပေါက်ဈေးရှိလုိ့ တောင်အမေရိကမှာ အနာကွန်ဒါမြွှေအမဲလိုက်မှု ခေတ်စားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနာကွန်ဒါမြွှေမျိုးများဟာ မြွှေမှာတင်မကပပဲ သတ္တဝါတွေအားလုံးမှာ ကမ္ဘာ့ထုထည် အကြီးဆုံး သတ္တဝါတစ်မျိုးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မိုယက်စ် ထုတ်ပယ် ခံရမှုတွင် ယူနိုက်တက် ကစားသမားများ ရှက်သင့်ကြောင်း ကိန်းဝေဖန်
အသင်း မန်နေဂျာ ဒေးဗစ်မိုယက်စ် ထုတ်ပယ် ခံရမှုတွင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစားသမားများ အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ရှက်သင့်ကြကြောင်း အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်ကိန်းက ဝေဖန် ပြောကြားလိုက်သည်။
အသင်းဖော် များကို ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်မှုကြောင့် ယူနိုက်တက်နှင့် လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့သည့် အိုင်ယာလန် ကစားသမားဟောင်းက မိုယက်စ်ကို အသင်းက အချိန်ပိုပေးသင့်ကြောင်းလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သေးသည်။ ဘောလုံးသမား ဘဝမှ အနားယူပြီးနောက် ITV၏ အစီအစဉ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် ကိန်းက “မိုယက်စ်ဟာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုနဲ့ အစပြုခဲ့ရတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီတုန်းက သူမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ယူတော့ အသင်းအမှုဆောင်ချုပ်က လူသစ်ခေါ်ဖို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အသင်းရဲ့ အစပြုပုံကိုက လေးလံနေခဲ့တာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “ခုဖြစ်ရပ်က ရှက်စရာလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ မိုယက်စ်ဟာ ခုထက်ပိုပြီး အချိန်ရခဲ့သင့်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် ကစားသမား တချို့ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရှက်သင့်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကြောင့် မိုယက်စ် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရလို့ပါပဲ”ဟုလည်း ပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းက မိုယက်စ်ကို ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ ရာထူးအတွက် ထောက်ခံခဲ့သည့် မန်နေဂျာဟောင်း ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ကိုမူ အပြစ်တင်စရာ လုံးဝအကြောင်းမရှိဟု ကာကွယ်သွားခဲ့သည်။
“ဒီကိစ္စမှာ ဆာအဲလက်စ်ကို ဝေဖန်လို့ မရဘူးလေ။ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်(၇)ကို ရောက်နေတာဟာ အသင်းအတွက် စိတ်ပျက်စရာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတွက် တာဝန်ယူမှု အပိုင်းမှာ မိုယက်စ်အတွက် အဓိက ပြဿနာက ကစားသမားတွေဆီက ဘာအကူအညီမှ မရခဲ့တာပါပဲ”ဟု ကိန်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။ ချယ်လ်ဆီးမန်နေဂျာ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုကလည်း ITVနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မိုယက်စ်အတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း စာနာစကားပြောသွားသည်။ “ကျွန်တော်ကတော့ ခုကိစ္စမှာ မှတ်ချက် မပေးဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားကောက်ချက် တစ်ခုခုတော့ ကျွန်တော် မပေးချင်ဘူး။ မိုယက်စ်အတွက် ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ တကယ်တော့ အလုပ်တာဝန် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ဘယ်မန်နေဂျာအတွက်မဆို ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်”ဟု မော်ရင်ဟိုက ဖွင့်ဟသွားသည်။
ချယ်လ်ဆီးနှင့်သရေကျခဲ့သည့် ရလဒ်ကို အက်သလက်ကစားသမားများ မကျေနပ်
အိမ်ကွင်းဗင်းဆင့်တေးကယ်ဒါရွန်တွင် ကစားခဲ့သည့်ပွဲစဉ်၌ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို အနိုင်ရအောင်မကစားနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အက်သလက်ကစားသမားများမှာမကျေမနပ်ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ အက်သလက်အသင်းသည် ထိုပွဲစဉ်တွင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအသာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု အကြိမ် ၂၀ ကျော်ပြုလုပ်ကစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ၀-၀ ဂိုးရလဒ်ဖြင့် သရေကျခဲ့ရသည်။
အက်သလက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဂါဘီက “ဒီပွဲရလဒ်ကို ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမကျေနပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲအခြေအနေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေပါတယ်။ သူတို့က ခံစစ်ကိုအားပြုကစားတဲ့ အသင်းဆိုတာ အခု ကျွန်တော်တို့သိသွားပါပြီ” ဟုဆိုခဲ့သည်။
အက်သလက်နောက်ခံလူ ဂျူအန်ဖရန်ကလည်း ထိုရလဒ်အတွက် မပျော်ရွှင်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂျူအန်ဖရန်က “ဒီပွဲရလဒ်အတွက် မပျော်ရွှင်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုကျွန်တော်တို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး” ဟုဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဂျူအန်ဖရန်က ချယ်လ်ဆီးကွင်းစတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျတွင် ၎င်းတို့အနိုင်ရနိုင်ကြောင်းလည်းဆိုခဲ့သည်။ “ချယ်လ်ဆီးက ခံစစ်ကစားပွဲတစ်ခုကို ကစားခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့က စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အနိုင်ရမယ်လို့ ယူဆထားလို့ပါ။ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ အနိုင်ရဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ လည်းရှိနေပါသေးတယ်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
အက်သလက်နှင့်ချယ်လ်ဆီးတို့သည် လာမည့်မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်း၌ ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
၁၁ နှစ်အရွယ် ယောင်္ကျားလေးနှင့် မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံပြီး ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထောင်ချခံရ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဟာဝိုင်ယီ မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် (၃၃) နှစ် အရွယ်ရှိ ပါလီရာစီယို အမည် ရ အမျိုးသမီး တစ် ဦးဟာ အသက် (၁၁) နှစ် အရွယ် ကလေး ငယ် တစ်ဦးနဲ့ ပေါင်းသင်း နေထိုင် ခဲ့လို့ ထောင် ဒဏ် အနှစ် (၂၀) ချမှတ် ခြင်း ခံရကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကလေးငယ်နဲ့ ပေါင်းသင်း နေ စဉ် အတွင်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတွေကို ကြိမ်ဖန် များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပါလီရာစီ ယိုဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ အသက်(၁၁)နှစ် အရွယ် ကောင်ကလေး တစ်ဦးနဲ့ ပေါင်းသင်း နေထိုင်ခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကလေးငယ်တွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး တဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ၀င် ရောက်လုပ် ကိုင်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရားရေးဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူတွေက တော့ ပါလီရာစီယိုဟာ အရွယ်မရောက်သေး တဲ့ ကလေးငယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အ ပြင် မဖွယ်မရာဆက်ဆံပုံတွေကို ဗီဒီယို ရိုက် ကူးမှု ပြုလုပ် ခဲ့တာမို့ ယခုလို ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါ တယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အရွယ်မရောက် သေးတဲ့ ကလေး ငယ်တွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက် ဆံမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ထိ ရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်နေတယ် လို့ သိ ရပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်း မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ ကို အမျိုးသမီးလေးယောက် တွင် အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်း
သိပ္ပံပညာရှင်များ က ဓာတ်ခွဲခန်း မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ ကို အမျိုးသမီးလေးယောက် မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အတွင်းမှာ အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။ ဆရာဝန်များ ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ လူနာများဟာ ကျန်းမာနေကြပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ချိန် မှာ အမျိုးသမီးလေးယောက် ရဲ့ အသက် ဟာ ၁၃ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ် အတွင်းမှာ ရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးလေးယောက် ဟာ Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome (MRKH) လို့ ခေါ်တဲ့ အလွန်ရှားပါးတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ဝေဒနာ ကို ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဝေဒနာ ဟာ အမျိုးသမီး ၄၅၀၀ မှာ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ပုံစံမမှန်တဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ ဒါမှမဟုတ် မိန်းမအင်္ဂါ လုံးဝ မပါရှိဘဲ မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဝေဒနာ ကို ကုသလေ့ရှိတဲ့ နည်းလမ်း က မိန်းမအင်္ဂါ ကို ခွဲစိတ် ပြီး ပြန်လည် ပြုပြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ခွဲစိတ် ပြုပြင် တဲ့ အခါမှာ နာကျင်မှု ဝေဒနာ ကို ခံစားကြရပါတယ်။ နောက်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ ခွဲစိတ်မှု ကို ခက်ခဲစွာ ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြတဲ့အခါမှာ ပိုမိုခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆရာဝန်များ က မိန်းမအင်္ဂါ ကို တီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ Cell တွေကနေ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဒနာရှင်များမှ အလွန်သေးငယ်တဲ့ Tissue တွေကို ရယူပြီး ဓာတ်ခွဲခန်း ထဲမှာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်ပတ်အကြာမှာတော့ အမျိုးသမီး မှာ ခွဲစိတ် ထည့်သွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ မိန်းမအင်္ဂါ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အမျိုးသမီးများ ဟာ သာမာန် အမျိုးသမီးများ လိုပဲ လိင်စိတ်ဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်တာ နဲ့ စိတ်ဆန္ဒ ပြီးမြောက်တာ တွေကို ရရှိခံစားနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးစုပေါင်း ကယ်လိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အသက်တစ်ချောင်း
လားရှိုး၊ ဧပြီ ၂၁
ဒီနေ့ဧပြီ ၂၁ ရက်၊ ခရီးရောက်မဆိုက် ရတနာပုံသတင်းစာအတွက်
နေ့ ဖောင်ရေးနေတဲ့အချိန်၊ မနက် ၁၁နာရီလောက်ပေါ့။
သတင်းလိုက်ဖော်လိုက်ဖက်၊ ရေးဖော်ရေးဖက် လင်းလင်း(လားရှိုး) က ဖုန်းဆက်လာတယ်။
'ကိုဗိုလ်ရေ... အထက (၁) ရှေ့ မှာ လူတစ်ယောက်လဲနေတာ ၅-ရက်လောက်
ရှိပြီလို့် ပြောတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။'
'ဟာ... ဒါသွားကြည့်ရမှာပေါ့။ လိုအပ်ရင် အကူအညီပေးမယ်။ ဆေးရုံတင်ပေး
သိပ်မကြာခင်ပဲ လင်းလင်း(လားရှိုး) အိမ်ရောက်လာတယ်။ နှစ်ယောက်သား
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်ခါနီး Arrow ကိုလင်းလည်း ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ ကို သူ့ ကား
ကလေးနဲ့ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတယ်။ ပလို့ ဆိုဂျိ ဆိုပြီးသား
သူတွေမို့နှစ်ခါမတိုင်ပင်လိုက်ရပဲ ကျွန်တော်နဲ့လင်းလင်း(လားရှိုး) က ဆိုင်ကယ်နဲ့ ၊ ကိုလင်းက ကားနဲ့အထက (၁) ကို ရောက်ခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းကို တစ်ပတ်သာပတ်လိုက်တယ်၊ လဲနေတဲ့လူကို မတွေ့ ဘူး။ နောက်
တစ်ပတ် ပတ်ကြည့်လိုက်မှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးအဆင်းလမ်း၊ အထက (၁) ရဲ့ပင်မ၀င်ပေါက်ရှေ့လမ်းချိုးလေးရဲ့အုတ်ခုံလေးနားက ဆက်သွယ်
ရေးကတူးထားလို့ပေါ်နေတဲ့ မြောင်းကလေးမှာ လူတစ်ယောက်လဲနေတာ
ကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ပါးစပ်မှာ အမြုပ်တစီစီနဲ့ ... ယင်ကောင်တွေ တလောင်းလောင်း
အဲဒီယင်ကောင်တွေကို သူ့ ရဲ့တုန်ရင်ချိနဲ့ နေတဲ့ လက်နဲ့ကြိုးစားဖယ်နေရှာ
တယ်။ မနိုင်တဲ့အဆုံး ယင်အနားခံရင်း သေအံ့မူးမူးဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်
ကို ဒါပထမဆုံး မြင်ဖူးလိုက်တာပဲ။
ရပ်ကွက် (၁) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။
တစ်ယောက်လာကြည့်ပေးပါ ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားတယ်။
မလှုပ်နိုင်လို့ထင်ပ၊ ဆီးဝမ်းတွေ ဘောင်းဘီထဲသွားထားလိုက်တာ အနံ့ ဆိုး
တွေ ထွက်နေတယ်။ စကားပြောကြည့်တော့ ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ လက်ထောင်
ပြခိုင်းတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထောင်ပြတယ်။ ခြေထောက်လှုပ်ခိုင်းတော့လည်း
ဒါဆိုရင် ဒီလူမသေနိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်။ ပရဟိတ လုပ်နေတဲ့ စိုးမင်းနိုင်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သာရေးနာရေးကားကို ခေါ်ပေးဖို့ 
ပြောလိုက်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်က ကားမခေါ်လာဘဲ ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာတယ်။
'ဘာဖြစ်တာလဲ.... အော်... ဟင်း' ဆိုပြီး ပြန်ထွက်သွားကြတယ်။
သတင်းထောက် ကိုမောင်မောင်သန်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ချက်ခြင်းပဲ ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး ခဏလေးအတွင်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာ
ပရဟိတလည်းလုပ်၊ မြို့ နယ်အထောက်အကူပြုမှာလည်း ပါဝင်တဲ့ ကိုစိုးမြင့်
နိုင်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သာရေးနာရေးကား အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။ သူ
အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးဘေးနားက ကျန်းမာရေးရုံးရှေ့ ကို ပါဂျဲရိုး အစိမ်းတစ်စီး လာရပ်တယ်။ ဒေါက်တာထွန်းသန်းဦးပဲ ဆိုပြီး Arrow ကိုလင်း
ဒေါက်တာထွန်းသန်းဦး ချက်ခြင်းလိုက်လာတယ်။ သူ့ နောက်ကလည်း
ကျန်းမာရေးရုံးက ၀န်ထမ်းနှစ်ယောက်လောက်လိုက်လာတယ်။ ယင်
တလောင်းလောင်း၊ ဆီးဝမ်းနံစော်နေပြီး ညစ်ပတ်ပေတူးနေတဲ့ လမ်းဘေးက
လူတစ်ယောက်ကို အခုပဲ ပါဂျဲရိုးပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ ဆရာက ရော်ဘာ
လက်အိတ်နှစ်ဖက်စွပ်ပြီး မရွံမရှာ စမ်းသပ်တော့တာပဲ။
နူတ်ကလည်း ဆက်တိုက်ညွှန်ကြားနေတယ်။ လက်ကလည်း
တောက်လျှောက် အလုပ်လုပ်နေတယ်။ သတင်းထောက်တွေကတော့ ဓါတ်ပုံ
တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာပဲ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးး ရောက်
ဆရာက ဆေးထိုးအပ်နဲ့ရေကိုစုပ်၊ လဲနေသူရဲ့ပါးစပ်ထဲထည့်ပေး၊ သကြား
ရည်ဖျော်ခိုင်း၊ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ တိုက်၊ နားကြပ်နဲ့ ထောက်၊ နမိုးနီးယား မိနေ
တယ်လို့ ပြော၊ အဲဒီလူက ချွဲတွေတက်လာတော့ ခေါင်းကို သူ့ လက်နှစ်ဖက်
နဲ့မပေးတာ။ ကျွန်တော်က ရေသန့် ဘူးခွံလေးတွေ ၀င်ခုပေးတယ်။ မရဘူး။
ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲ အဲဒီလူကို ထိုင်လျက်ဖြစ်အောက် မပေးလိုက်တယ်။ ချွဲတွေ
ထွက်လာတယ်။ ဆရာကပဲ ဂွမ်းနဲ့ချွဲတွေကို သုတ်ပေးတယ်။ ယင်ကောင်
ဆက်တိုက် လာလာနားနေတဲ့ နူတ်ခမ်းကို သန့် ရှင်းသွားအောင် သုတ်ပေး
လူနာတင်ကား ရောက်လာတယ်။ လူနာတင်ကားပေါ်က လူသုံးယောက် စတီး
ထမ်းစင်ကို မချပြီး သွက်သွက်လက်လက်ပဲ ဆင်းလာတယ်။ အဲဒီလူကို ထမ်း
စင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်တော့ ကျွန်တော်က 'ဒေါက်တာထွန်းသန်းဦး ရောက်နေ
ပါတယ်။ ခဏစောင့်လိုက်ပါအုံး' လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဆရာပြန်ရောက်လာတယ်။ လားရှိုးပြည်သူ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို ဖုန်းဆက်
အကြောင်းကြားပေးတယ်။ အဲဒီလူကို ဆရာနဲ့ အတူ လူနာတင်ယာဉ်ပေါ်
ပါလာသူတွေက ၀ိုင်းဝန်းတင်လိုက်ကြတယ်။ အရေးပေါ်ဥသြဆွဲပြီး မောင်း
တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနကို
တစ်ခါမ မမြင်ဖူးဘူး။ ထမီအပြာဝတ်၊ အနီဝတ် သူနာပြုဆရာမတွေ အသင့်
စောင့်နေတယ်။ အရေးပေါ်ဆေးကုခန်းထဲကို ခေါ်သွားကြတယ်။ အပြာရောင်
၀မ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့ ဆရာဝန်မ လှလှလေးက မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ဘဲ
အဲဒီ ညစ်ပတ်နံစော်နေတဲ့ လူနာကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုတယ်။ ဂလူးကို့ စ်သွင်းပေးလိုက်တယ်။ ဆေးရုံမှာလက်ခံပေးလိုက်တယ်။ ဆေးရုံ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ကြပ်လည်း ရောက်လာတယ်။ ယဉ်ထိန်းကလည်း ပြူတစ်
ဖျားနာဆောင်ကို လူနာတင်ကားနဲ့ ပဲ ဆက်ပို့ ကြတယ်။ အပေါ်ထပ်ရောက်
တော့ ကုတင်နေရာယူ။ တာဝန်ကျဆရာဝန်ကလည်း ဒုလ္လဘထွက်ဖြစ်ဟန်
တူရဲ့ ၊ ကတုံးကလေးနဲ့ ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကြည့်ပေးရှာတယ်။
နာမည်ကို ကြိုးစားမေးတော့ အဲဒီလူနာမည် သန့် ဇင်ဝင်း၊ အသက် ၂၃ နှစ်။
ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ မေးလို့ မရသေးဘူး။
အားအင်ချိနဲ့ နေတဲ့သူ့ ကို သာရေးနာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးက လူ ၃- ယောက်နဲ့သတင်းထောက် လင်းလင်း(လားရှိုး) တို့ က ရာဘာလက်အိတ်
တွေစွပ်ပြီး ချီး၊သေးအားလုံး ဆေးပေးကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တတွေ အနံ့မခံနိုင်လို့အပြင်ထွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ မရွှံမရှာ လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ သူတို့ 
ကို ကြည့်ပြီး လေးစားမိတယ်။
ခုတော့ မောင်သန့် ဇင်ဝင်းတစ်ယောက် လမ်းဘေးမြောင်းထဲမှာ ပုပ်စော်နံပြီး
ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့သေမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရရာကနေ ဆေး
၀ါးစုံလင်ပြီး ဆရာဝန်၊ဆရာမတွေရဲ့ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုအောက်ကို
ရောက်သွားပြီ။ ရပ်ကွက် (၁)အုပ်ချုပ်ရေးမှူးး ယူလာပေးတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးလဲ လဲဝတ်ထားပြီ။ ရေလည်း ချိုးပြီးသွားပြီ။
သူ မသေလောက်တော့ပါဘူး။ လင်းလင်း(လားရှိုး)က လူနာအတွက် အာဟာ
ရ ဆိုပြီး ဆေးရုံကတာဝန်ကျ ဆရာဝန်မလေးဆီကို ငွေတစ်သောင်း လှူသွား
တယ်။ ညနေပိုင်းမှာ Arrow က်ုလင်းက ငွေ နှစ်သောင်း ထပ်လှူထားတယ်
ပြောတယ်။ ဆေးရုံက ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးကလည်း သွားကြည့်တယ် လို့ ကြားတယ်။
ဒီနေ့မထင်မှတ်ဘဲ အသက်တစ်ချောင်းကယ်တင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တစ်နေ့ လုံး ပျော်နေမိတယ်။
ဆရာဝန်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ဒေါက်တာထွန်းသန်းဦး၊ တကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုး
မကြည့် လိုအပ်တာတွေကို ချီးသေးကအစ ၀ိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ လူငယ် သာရေး
နာရေးကူညီစောင့်ရှောက်မှုအသင်းက ညီအစ်ကိုများ၊ ချက်ခြင်းအကူအညီ
ပေးခဲ့တဲ့ ကိုစိုးမြင့်နိုင်၊ ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ၊ အပြောအဆိုမတတ်ပေမယ့်
လိုတဲ့အချိန်မှာ ချက်ခြင်းရောက်လာတတ်တဲ့ သတင်းထောက် စိုးမင်းနိုင်၊ ပရ
ဟိတဆိုရင် တက်ကြွစွာရောက်လာတတ်တဲ့ သတင်းထောက် ဦးမောင်မောင်
သန်း၊ တစ်ဖက်သားကို ကူညီဖို့အလုပ်ပစ်အကိုင်ပစ် လိုက်လုပ်ပေးတတ်တဲ့
Arrow ကိုလင်း၊ စိတ်ရင်းကောင်းပြီး အနစ်နာခံတတ်တဲ့ လင်းလင်း(လားရှိုး)၊
လူနာကို တစ်ချက်မှ မရွံရှာပဲ ကြည့်ရှုကုသပေးတဲ့ လားရှိုးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး
က ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုဆရာမများ၊ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ရပ် ကွက် (၁) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးးနဲ့ အတူ လူနာကို ဆေးရုံမှာ လက်ခံကုသပေးတဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဒီပ တို့ အားလုံး တစ်ကယ်ကို လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို Lashio News Diary က လေးစားပါကြောင်း